नेपालको बीआरआई यात्रा : काठमाडौंमा कहिले पुग्छ ‘चुच्चे रेल’ ?
काठमाडौं –राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीको चीनको राजकीय भ्रमणमा औपचारिक रूपमै ‘बेल्ट एण्ड रोड इनिसियटिभ’ (बीआरआई) मा नेपाल संलग्न भएको छ ।
बेइजिङमा सम्पन्न बीआरआईको दोस्रो गोलमेच सम्मेलनले जारी गरेको प्रतिवद्धता पत्रमा नेपालले गरेको प्रस्ताव पनि समेटिएको छ ।
चीनको बेल्ट एण्ड रोडको मुख्य अवधारणामा सन् २०४९ सम्ममा यो आयोजना पूरा गर्ने उल्लेख छ । बेल्ट एण्ड रोडको अवधारणा २०१३ बाट शुरू भएर २०४९ सम्ममा पूरा गर्ने लक्ष्य रहेको राजनीतिक विश्लेषक हरि रोका बताउँछन् ।
२०४९ मा चिनियाँ कम्युनिस्ट पार्टीले चीनमा शासन गरेको सय वर्ष पुग्छ । १९४९ मा चिनियाँ क्रान्ति सम्पन्न भएको थियो । उनीहरूले २०२१ सम्ममा सबै योजना तयार गरिसक्छन् र निर्माण सम्पन्न गर्ने चाहिँ २०४९ मा हो । रोकासँग गरिएको कुराकानीमा आधारित विश्लेषणको अंश :-
२०१३ देखि २०१९ का बीचमा बेल्ट एण्ड रोडका विषयमा सयौं किताब लेखिइसकेको छ । अबको २ वर्षमा उनीहरूले आयोजनामा समेट्न सकिने सबै पूर्वाधारहरूको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) तयार गरिसक्नुपर्ने छ । हामी चीनको एकदम नजिक भएको र बीआरआईमा भारतीयहरू जोडिन नचाहेका कारणले हामीले चीनको अवधारणाभित्र रहेर आफ्नो फाइदाका लागि केही गर्न सक्ने नजिकको सम्भावना देखिएको हो ।
खाँचो दीर्घकालीन सोचको
नेपालले बीआरआईमा सामेल भइसकेपछि चुच्चे रेल कहिले आउला भन्दै दिन गनेर हुँदैन । पहिलो कुरा त हामीले दीर्घकालीन सोच बनाउनुपर्‍यो । बीआरआईको अवधारणामा मध्य एसिया, उत्तरी युरोप र दक्षिण पूर्वी एसियामा भएका मुलुकहरूलाई एकअर्कासँग जोड्ने कुरा उल्लेख छ । हामी जोडिएपछि ती देशसँग स्वतः नेपालको व्यापारिक र अन्य सम्बन्ध कायम हुन्छ ।
यतिबेला हाम्रा आफ्नै कतिवटा नाका सम्बन्धित हुन्छन् र त्यहाँका आवश्यक पूर्वाधार के–के हुन सक्छन् ? भन्नेबारे नेपालले पहिलो गृहकार्य गर्नुपर्ने देखिएको छ ।
दोस्रो कुरा खराब ऋणमा नेपाल पर्छ कि भन्ने आशंका पनि व्याप्त भइरहेको छ । रोड एण्ड बेल्टलाई कसरी बुझ्ने भन्नेबारे हामी भ्रममा छौं । पहिलो कुरा त जहाँ हामी विभिन्न माध्यमबाट जोडिएका छौं, ती ठाउँ बेल्ट हुन् भने जोडिने माध्यम भनेको रोड हो । जोडिने माध्यम रोड, रेल, हवाईमार्गजस्ता विभिन्न माध्यमहरू हुन सक्छन् ।
रोड जोडिएको बेल्टले आफ्नै उत्पादनले लगानी तिर्न सकोस् भन्ने बीआरआईको अवधारणा हो । जोडिनमा हामीले जति लगानी गर्छौं, त्यति उत्पादन जोडिएको ठाउँले गर्नैपर्छ अन्यथा किन जोडिने ? बीआरआईमा जोडिएपछि दीर्घकालीन सोचका रूपमा हामीले के उत्पादन गर्ने भन्नेमा अहिल्यै अध्ययन, अनुसन्धान र खोज गर्न जरुरी छ ।
चीनको राष्ट्रपतिले खराब ऋणका बारेमा पटक पटक बोलिरहेका छन् । ऋणको मात्र कुरा होइन, यो चाहिँ जहाँ जहाँ ‘कनेक्टिभिटी’ पुग्ने हो, त्यो ठाउँमा केही उत्पादन होस् र भएको उत्पादन अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा जाओस् भन्ने सोच रहेको स्वयं चीनकै राष्ट्रपतिले पटक पटक बताउँदै आइरहेका छन् ।
हामीले कस्तो ठाउँको बाटोमा लगानी गर्छौं ? स्पष्ट छ, जहाँ उत्पादन छ, त्यहाँ उत्पादित सामानहरू अन्त लैजान सकिने अवस्थामा मात्र बाटो बनाउन चाहन्छौं । यस सम्बन्धमा हाम्रो एउटा खराब अनुभव छ ।
हामीले जिरीको बाटो बनायौं तर त्यहाँबाट काठमाडौंमा के आउँछ भन्ने कुरा हामीले सोचेनौं । जिरीको बाटो भएर काठमाडौंमा के भित्र्याउने हो भन्ने नसोचिकन काम गर्‍यौं र त्यसमा पैसा मात्र खेर गयो । त्यो बाटोले सोलुखुम्बु, ओखलढुंगा र यता आएर दोलखा, सिन्धुपाल्चोकसम्म जोड्छ तर त्यहाँका उत्पादन अन्य ठाउँमा जान सकेका छैनन् । रोड वा बेल्ट तयार गर्दाखेरी त्यो बेल्टको उत्पादकत्व पनि बढाउनुपर्‍यो ।
बीआरआईमा हाम्रो संलग्नतालाई लिएर जति उत्साहित भएका छौं, त्यही रूपमा हाम्रो बेल्टमा के उत्पादन हुन सक्छ ? कति हुन सक्छ र त्यसलाई कसरी अन्तर्राष्ट्रिय मार्केटमा लैजान सकिन्छ भन्ने विषयमा सोचिरहेका छैनौं ।
पर्यावरणीय प्रभावको अध्ययन
चीनसँग जोडिनका लागि हामीले ठूलो पूर्वाधार निर्माणको काम गर्नुपर्ने हुन्छ । त्यो पूर्वाधार निर्माणले वातावरणीय असर के पर्छ भन्नेमा सरोकारवाला सचेत भएको देखिएको छैन । हामी कहाँ के कस्तो वातावरणीय प्रभाव पर्न सक्छ भन्नेमा हामीले आफ्नो ढंगबाट गृहकार्य गर्नुपर्छ । चीनबाट रेल वा बाटो आउँदा हाम्रो हिमाली क्षेत्रको पर्यावरणमा पर्न सक्ने असरबारे विस्तृत अध्ययन हुनुपर्छ । यत्तिकै चुच्चे रेल सम्झेर बसेर हुँदैन ।
वातावरणीय प्रभावसँगै पर्यटकीय सम्भावनाका कुराहरू पनि त्यत्तिकै मात्रामा आउँछन् । पूर्वाधार निर्माणका क्रममा पर्ने वातावरणीय प्रभावले पर्यटकीय सम्भावनालाई कत्तिको असर पर्छ भन्नेमा हामी सचेत हुनुपर्छ र त्यसका लागि पूर्वतयारी आवश्यक पर्छ । नकारात्मक प्रभावको निराकरण कसरी गर्ने भन्ने कुरा उत्तिकै महत्त्वपूर्ण छ । कार्बन उत्सर्जनका कुराहरू छन् । तिनलाई न्यूनीकरण गर्ने प्रयासबारे अहिल्यै अध्ययन गर्नुपर्छ ।
चीनसँग जोडिनु भनेको भारतसँग थप जोडिनु हो
अर्को कुरा पनि छ – चीनसँग जोडिनु भनेको भारतसँगको व्यापारिक सम्बन्ध कम गर्नु भन्ने अर्थमा बुझ्नु हुँदैन । भारतको पश्चिम बंगालदेखि लिएर उत्तराखण्डसम्मको सीमा नेपालसँग जोडिएको छ । भारतको यो बेल्टमा आधाआधी जनसंख्या बसेका छन् । बीआरआईमा हामी जोडिनुपर्छ भन्नुको अर्थ हामी भारतको आधा जनसंख्यासँग पनि थप जोडिनुपर्छ भन्ने अर्थमा बुझ्नुपर्छ ।
नेपाल ट्रान्जिट हब बन्न सक्छ । भारतको बिहार, उत्तराखण्ड जस्ता क्षेत्रमा अझै पनि सामुद्रिक पहुँच टाढा छ । उनीहरूले नेपालमार्फत चीनसँग व्यापार व्यापार गर्न सक्ने स्थितिमा नेपालले मन सानो बनाउनु हुँदैन ।
रेल अहिल्यै आउँदैन
अहिले चर्चामा रहेको सिगात्सेदेखि रसुवागढीसम्म आइपुग्ने रेलको दूरी लगभग ५ सय किलोमिटर छ । पहिले त उनीहरूले त्यसको डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट उनीहरूले तयार गरेकै छैनन् । यदि २०२५ सम्म उनीहरू त्यहाँ आइपुगे भनेपनि हामीलाई यता जोड्न थप ५ वर्षभन्दा बढी लाग्न सक्छ ।
तर त्यसो गर्नुभन्दा पहिला हामीकहाँ यो साइडबाट काठमाडौंदेखि रसुवागढीसम्म पुग्ने हामी आफैले पनि निर्माण गर्न सक्ने केही कुराहरू छन् कि ? चीनको मात्र मुख ताकेर बस्दा हामीलाई ढिलो त अवश्यै हुन्छ ।
रेलकै लीग बिछ्याउन गाह्रो होला हामीलाई । तर डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट तयार गरिसकेपछि त केही काम घट्ला नि ! अर्काको मुख ताक्ने नेपालीको बानी छ । हामी आफैं पनि काम गर्न अघि सर्नुपर्छ । तत्कालका लागि हामीसँग समुद्रसम्म पुग्ने विकल्प चाहिँ प्राप्त भएको छ । बेल्ट एण्ड रोडमा व्यावहारिक रूपमा जोडिनुभन्दा अगाडि चिनियाँले नेपाललाई आफ्ना बन्दरगाह प्रयोग गर्न दिने निर्णय गर्नु नेपालीका लागि सुखद हो ।